तेलमा डुबेका शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाबाट डाक्टरहरु आए – भिडियो हेर्नुहोस – Articles Nepal
तेलमा डुबेका शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाबाट डाक्टरहरु आए – भिडियो हेर्नुहोस
त्यो दुर्घटनापछि शिशिर झनक्क रिसाउने भएका छन् । आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दै घरभरीका सबै ऐना फुटाईसके । उनलाई आफु भुत जस्तो लाग्छ रे । अहिलेदेखि नै आफ्नो अनुहार प्रति उनलाई ठुलो घृणा छ । यसैबिच शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाको न्युयोर्कबाट डाक्टरहरु आएका थिए । किर्तिपुर अस्पतालमा शिशिरलाई हेर्दै उनीहरुले के भने ? के शिशिरको उपचार सम्भव छ ? के प्लाष्टिक सर्जरी गर्न मिल्छ ? त्यसको लागि कति खर्च लाग्छ ? त्यसको लागि तलको भिडियो हेर्नुस
Previous Post: जापान अपडेटः के हुँदैछ नेपाली कामदार लैजाने प्रकृया ?
Next Post: सेयर गराैं ! पाथीभरामा मन्त्री रबिन्दको अन्तिम तस्वीर